China pp bhokisi remarata ye Express Express Mugadziri uye Mutengesi | Sihai
Pombi yerudzi pepa inogona kushandiswa mukutaura, kazhinji, ndeyebhokisi rekutaura, kutumira kutumira. Pp isina mhango jira mapatya-madziro mamiriro, inochinjika kupeta, iyo mapatya-madziro mamiriro akakwana ekudzivirira zvigadzirwa pakutakura.
Pombi yerudzi pepa inogona kushandiswa mukutaura, kazhinji, ndeyebhokisi rekutaura, kutumira kutumira. Pp isina mhango jira mapatya-madziro mamiriro, inochinjika kupeta, iyo mapatya-madziro mamiriro akakwana ekudzivirira zvigadzirwa pakutakura. Pp isina mhango jira rinogona kuvezwa akawanda marudzi epakeji bhokisi, epurasitiki mudziyo wekutaurisa, bhokisi rekuratidzira zvakare rinogona kuwedzera chikamu chemasaga akapatsanuka akasiyana uye kuratidza.
Iyo pp hollow sheet expression bhokisi iri nyore kupeta, kuchengetedza nzvimbo, kuunza vatengi dhighidhi yepamusoro yekushandisa ruzivo. Iyo pp hollow board expression bhokisi rakagadzirwa nemwenje uye yakasimba zvinhu, ine yakasimba isina mvura, isina kupisa, isina moto, anti-static, anti-ngura, anti-kusakara, anti-UV, anti-vibration, anti-yakaderera tembiricha uye mamwe mabasa. Aya mabasa anovimbisa kutendeka uye mashandiro ebhokisi kusvika padanho rakakura, zvakanaka kuchengetedza zvigadzirwa kana uchitakura uye uchifamba. P corrugated expression bhokisi inogona kuve yakagadzirirwa kudhinda kune akasiyana zvigadzirwa uye logo, kazhinji anodhinda ari silkscreen, mamwe anogona kuita UV kudhinda kune yekunze kushandiswa.
Pashure: pp bhokisi risina sarudzo
Zvadaro: pp chemarata pasi chengetedza jira
Corrugated Plastiki Sheet Bhokisi
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Corrugated Plastic Box
Kupeta Corrugated Plastic Bhokisi
Mapeji Corrugated Kurongedza Bhokisi
Mapeji Corrugated Plastiki Bhokisi
Mapeji epurasitiki Corrugated Bhokisi
zvemagetsi turnover bhokisi pp chemarata ESD elec ...
ESD pp chemarata chemuparadzanisi bhokisi reMagetsi pr ...